Tuesday September 08, 2020 - 14:07:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya deegaanka Jannaay Cabdalle ee duleedka Magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maanta barqadii uu halkaas ka dhacay qarax weyn kaas oo lagu beegsaday Maleeshiyaat shisheeye-kalkaal ah.
Qaraxa ayaa lagu beegsaday maleeshiyaatka gurmad ah oo ka yimid dhanka Magaalada Kismaayo kuna sii jeeday Jannaay Cabdalle.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliska Ciidanka Xarakada Al-Shabaab Al Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in qaraxa lagu dilay afar katirsan maleeshiyaatka Soomaalida ah ee shisheeya la shaqeeya halka saddex kalena lagu dhaawacay.
Waa Qaraxii labaad oo muddo 24 saacadood ka yar ka dhaca Jannaay Cabdalle kaas oo lala beegsaday shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo maleeshiyaatka taageerada u ah.
Shalay subixii ayay ahayd markii camaliyad istish-haadi ah lala beegsaday Ciidamo Maraykan ah iyo Maleeshiyaat Soomaali ah oo la socday, waxaana halkaas ku dhintay Afar ka tirsan ciidamada Maraykanka iyo 16 Maleeshiyaat ah.